အူးဗိုက်ပြောတဲ့ Comment off အကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » အူးဗိုက်ပြောတဲ့ Comment off အကြောင်း	45
အူးဗိုက်ပြောတဲ့ Comment off အကြောင်း
Posted by ဂျစ်စူ on Jun 16, 2012 in Creative Writing, How To.., Myanmar Gazette | 45 comments
comment off error
တူဒေး…လေဒီဗိုက်က ကျုပ်ကို ဒီမိုကဒေစီ ပေးထားသမို့ …အပျင်းပြေ စိတ်ပြေလက်ပျောက်
(စီးပွားရေးကလဲ နည်းနည်း ကျနေသမို့ ..) ပို့ စ်မတင် ဖြစ်တာလဲ ကြာပြီသမို့ ..
ဘာဖြစ်လို့ .ညာဖြစ်လို့ .ဆိုပြီး…တစ်ခုတင်ပါရစေပေါ့ဗျာ..။
ကျနော်လဲ အားအားယားယားရှိတာနဲ့ 
စာရေးတင်တဲ့အခါ ဘာကြောင့် ကွန်းမန့် တွေက အော့ဖ် ဖြစ်ပြီး ဘာကြောင့် % တွေနဲ့ စာတွေ တစ်ဝက်တစ်ပျက် ဖြစ်နေသလဲ ဆိုတာလေး အဖြေထုတ်ဖို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။
စာအပြည့်မပေါ်၊ ကွန်းမန့် အော့ဖ် ပြဿနာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲ အနော်လဲ သေချာမသိပါဘူး.. ။ တိန်…..
ဒါပေသိ ဖြစ်နိုင်မယ်ထင်တာလေးတော့ အကြံပေးခွင့်ပြုပါခင်ဗျား..။
အတော်များများက စာရေးတဲ့အခါ တစ်ခုခု ထဲမှာ အရင်ရေးထားပြီးမှ ဆိုဒ်မှာ New Post ခေါ်၊
Word ထဲကစာကို ပြန်ကူးပြီး Publish လုပ်ကြတယ်ထင်ပါတယ်..။
ကူးထည့်လိုက်တဲ့ စာတွေကတော့ Text Body ထဲမှာ အပြည့်ရှိတယ်..ဒါပေသိ..
အောက်နားက Word count ဆိုတာလေးက0(သုည) ဖြစ်နေတယ်..
အောက်ကပုံထဲမှာ အနီနဲ့ ဝိုင်းပြထားပါတယ်..
အခုလို Zero ဖြစ်နေရင် အယ်ရာတက်နိုင်ပါတယ်..
အဲတာကို ဒီတိုင်းထားပြီး Publish လုပ်လိုက်မယ်ဆို တစ်ဝက်တစ်ပျက်တွေနဲ့အပြည့်မပေါ်ပဲ ကြောင်သွားမယ်ထင်ပါတယ်.။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Word count က အမှန်တိုင်း အလုပ်မလုပ်ဘူးလေ..။
စာလုံးအရေအတွက်ကို သူက အမှန်အကန် ရေတွက်ပေးနေရမှာ ။
စာတွေက အများကြီးရှိပြီး သူက ဇီးရိုးပြနေတာဟာ မူမမှန်တဲ့ ဖြစ်ရပ်ပေါ့။
ဖြေရှင်းဖို့ ကတော့ ပို့ စ် တင်တဲ့အကွက်ထဲကို စာတွေ ကူးထည့်ပြီးရင် ဟိုးအောက်ဆုံး စာကြောင်း အဆုံး ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
စာကြောင်းအဆုံးမှာ Enter ခေါက်လိုက်တော့ Word count အမှန်တိုင်း အလုပ်လုပ်သွားပါတယ်
ဒါဆို Word count: က အမှန်အတိုင်း အလုပ်လုပ်သွားပြီမို့တင်ပြီးတဲ့အခါ တစ်ဝက်တစ်ပျက်တွေ ပေါ်ဖို့အခွင့်နည်းသွားပါဘီ..။ ( အထင် )
ဒါကတော့ အသေချာဆုံးပဲ ဟဲဟဲ..
အားလုံးရေးပြီး.. Category, Tag ထည့်ပြီး လယ်ဒီပဲ ဆိုပြီး ပို့ စ်ကိုလဲ ဒိန်းဆို Publish လဲ လုပ်ကော
အချိန်ကိုက် ကွန်နက်ရှင်က ကျ ။
အဲတော့ စာတင်ဖို့လယ်ဒီဖြစ်တဲ့အခါ ပတ်ဘလစ် မလုပ်ခင် ကွန်နက်ရှင် အခြေအနေလေး ကြည့်။
ကောင်းနေတဲ့ အနေအထားရှိရင် Publish လုပ်၊ ကျနေတဲ့အနေအထားဆို တက်တဲ့အထိစောင့်။
ဒါဆို အမှားယွင်း နည်းသွားပြီး အိုကေတဲ့ ပို့ စ်တစ်ခု ထွက်လာမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း ခင်ဗျား..။ ( အထင် )
ကျနော်ဆို ဂူဂယ်ခရုမ်းသုံးလိုက်..မော်ဇီလာဖားဖောက်စ် သုံးလိုက်နဲ့ ပဲ..။
အခုရေးနေတာ Google Chrome နဲ့ ..
ပုံတင်ဖို့Add media ကိုနှိပ်တော့ ဘာမှ ပေါ်မလာဘူး။
ကွန်နက်ရှင် မကောင်းတာလဲ ပါမပေါ့။အဲဒါနဲ့Update ဖြစ်တဲ့ Mozilla Firefox ကို ထပ်ဖွင့်ပြီး
ပုံတင်ဖို့ ကြိုးစားရသပေါ့..။ပုံတင်တာ Firefox နဲ့ အိုကေသွားတယ်ပေါ့ဗျာ..။
ကျနော်တော့..လင့်ခ်တွေဖွင့်ရင် မြန်မြန်ပေါ်တတ်တဲ့ Google Chrome ကိုပဲအသုံးများပါတယ်..။
ပြောချင်တာက Browser Update ဖြစ်ဖို့ လဲ လိုပါတယ်ခင်ဗျား ပေါ့ဗျာ..။ ( အထင် )
စိတ်ရှည်သည်းခံ လမ်းကြောင်းမှန် တင်ရန် ဂေဇက်ပို့ စ် ..ရို့ ..ရို့ ..
( နိုင်ဂံဂျားက အန်ခယ်လ်အူးလေး အန်ထီဂျီးဒေါ်တွေကိုပြောတာဟုတ်ဘူးနော်..
ပြည်တွင်းက ဆရာ့ဆရာ မဟာ ဂျွတ်စကွတ်တွေကိုလဲ ပြောတာမဟုတ်..
တားပြောတာက..မြန်ပြည်နတ်ကို အံတုလို့၊ စာရေးတာ ၀ါသနာပါလို့ ..ဘာမှ နားမလည်လို့ ၊
ရွာထဲမှာ အခြေချချင်လို့စတဲ့.စတဲ့…ပို့ စ်မတင်တတ်သေးတဲ့ ဘိုးဒေါ်ဘွားဒေါ် အန်ခယ်လ် အူးလေး.. ဂျီးဒေါ် အန်တီတွေကို အဓိက ရည်ရွယ်ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်.။ )
မြောင်းတကာ အူးဗိုက် ဘီအီးခိုက်
View all posts by ဂျစ်စူ →	Blog
water-melon says: မြောင်းတကာ အူးဗိုက် ဘီအီးခိုက်အား
ရဲဘော်ဘိန်းစားဖရဲမက ခေါင်းခေါက်ပြီး လေးပြုသွားပါတယ်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2246
water-melon says: အူးဗိုက်စီးပွားရေးကျရင်
ဘီအီးလေးပါ ရောင်းရင် ပိုတွက်ခြေကိုက်တယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6346
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: ခေါင်းခေါက်ရင် မြောင်းနောက်မယ်
မြောင်းနောက်တော့ အနံ့ ဆိုးထွက်မယ်..
ရင်ထဲကို အေးမြသွားမယ် ဘီအီးရေ..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 10299
မောင်ပေ says: အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေပါဘဲ
ပိုစ့် မတင်တတ်သူတွေ အတွက် ပြီးပြည့်စုံစေပါတယ်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6346
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: အုပေလဲ ကြက်မာပါဇေ..ချက်သာပါဇေ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1355
Gipsy says: ဘဘဗိုက် လဲ လမ်းညွှန်ချက် အများကြီးပေးနိုင်ပါစေ….
ပို့စ်တင်သူများလဲ လမ်းညွှန်ချက်များဖြင့် စာရေးသားနိုင်ကြပါစေ….
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ..အူးအုဂျစ်ဖစီ ခင်ည
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 66
Myo Min Oo says: မန်ဘာအသစ်တွေ ကိုယ်ရေးထားတဲ့ ပိုစ့်ကို ပြန်ပြင်ချင်ရင် ဘယ်နှစ်ရက်စောင့်ရလဲ
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: ဂစ်…..
၀င်ပြီး လျှာရှည်တတ်လို့ကျနော့်ပဲ ၀ိုင်းမေးတတ်ကြတာကလား..
ဂယ်တော့ အဲဒါတွေက ကျနော် ပြောခွင့်မရှိ..သိလဲမသိပါကြောင်းခင်ဗျား..
အနီးစပ်ဆုံး အကြံပေးရရင် …
ပို့ စ် အပုဒ် လေးငါးဆယ်လောက် ပြည့်အောင် ရေးတင်ကြည့်လိုက်ပါလား..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1317
amatmin says: ကျေးဂျူးတင်ပါဒယ်..။
စာရိုက်ရမှာ ပျင်းလို့ အူးလေးဆီကနေ
ကော်ပီလုပ်မန့်လိုက်သဗျ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6346
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: လာထား နှစ်ကျပ်..
Gipsy says: သဘာရင့် သူတွေ ဒါမှ မဟုတ် သဂျီး က အသိအမှတ်ပြုသူတွေ သာလျှင်
ကျုပ်လဲ အဆိုပါ ပြင်ဆင်ခွင့် မရရှိသေးပါကြောင်း…..။
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: ခဏခဏ ပြင်တဲ့အခါ ပွိုင့်စစ္စတမ်ကြောင်တတ်လို့ ..လူတိုင်းကို ပေးမပြင်တာလို့ကြားဖူးသဗျာ..
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဗိုက်ကလေးရေ အတွေ့နောက်ကျလေခြင်း
မင်းသာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်က သာဒီပိုစ်ကိုရေးရင် ငါပိုက်ဆံတွေအပိုကုန်မှာမဟုတ်ဘူး။
စတစ်ထဲမရေးးတတ်ခင်က ပို့လိုက် လေထဲပျောက်သွားလိုက်နဲ့အတော်စိတ်လေခဲ့ရတာပါ။
အခုတော့ စတစ်ထဲသိမ်း ကော်ပီကူးပို့ပျောက်မှာ မကြောက်ရတော့ဘူးနော်။
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: မာမီပေါက်ရေ..
စစချင်းကတော့ အနော်တို့ လဲ ဒီလိုပဲပေါ့နော်..
ကြာလာတော့လဲ ဒီလိုပဲ အလုပ်က သင်သွားတာပဲပေါ့ နော်
အားပေးစကားလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ လေးလေးမာမီပေါက်..ဟောက်စ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1880
ကိုရင်စည်သူ says: မနေ့ကတုန်းက အဲ့ပို့စ်တင်နေရဒါ မရဒါ အဲ့လာကြောင့်ကိုးးး..
နာလည်း တော်တော်ရှော်တဲ့လူပဲ။ အခုလို တားတားရပ်
လိုနေတဲ့ ကွက်လပ်တွေကို ဖြည့်ပေးတဲ့ အူအူးကို
မြောင်းတကာလိုက်ပြီး ဘီအီးခေါ်တိုက်ခိုင်းပါ့မယ်… :D :D
တား ကဗျာကို အူးဗိုက် ဥပမာ ပြထားတဲ့အတွက်…
အမြည်းကို အူးဗိုက်ပဲ ကျွေးပါတော့ဗျို့… ကွိကွိ… :P :P
တင်ထားပေး… :D :D
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: တိုရင်စိ ကဗျာလေးကို ကြော်ငြာပေးတာ..
ဒါမှ နီကီတာလေးက နောက်မီးလင်းချင်နေတဲ့ တိုရင်ဆိုပြီး ပြဿနာရှာမှာလေ ဂေဇက်ပို့ စ် တင် အသက်ငင် ဘီအီးလေးတော့ အနားဆောင်ထား
ကိုရင်စည်သူ says: အဟိ.. အူးဗိုက်ဂလဲ.. တားက နောက်မီးကော အရှေ့မီးကို
အပေါ်မီးကော အကုန်းလင်းထားတာ… ချိတ်မပူပါဘူး.. :D :D
ကိုရင်ရှိနေသရွေ့ဒေါ့ နီကီလေး ရွာထဲ ခြေမချရဲအောင်
ဓါတ်ရိုက်ဓါတ်ဆင်လုပ်ထားဘီးသား… :P :P
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1258
ဘဲဥ says: အခုလို ရှင်းလင်း(တင်ပြ)ပေးလို့ ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်း သေသေချာချာ မြင်လိုက်ရဘာဒယ် အုဘိုက်ခဗျားးးး :grin:
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: မြင်ရင် မြင်တယ်မှတ်ဟဲ့ ဘဲအုမရဲ့
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1148
ရဲစည် says: အခုလို မူးနေတဲ့ကြားကနေ လေတချက် အပြို့မှာ အကျိုးရှိရှိ ရှင်းပြပေးသွားလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အနော်လဲ နည်းနည်းကျတုန်း မျက်လုံးတဖက်ဖွင့်ပီး တတ်နိူင်သလောက် ဖတ်သွားပါတယ်။ မူးမူးနဲ့ အရင်က ပို့စ်တင်ရင် ခဏခဏ ဖြစ်တတ်သမို့ ခုတော့ ဖြေရှင်းတဲ့ နည်းလေးပြပေးတဲ့ ဥူး၎အဏ်ကရ် အူးဘိုက်ကို ချီးယားစ် လုပ်သွားပါကြောင်း…
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: တိုရဲစိခင်ည
ကျနော်တော့ ညက အယားလွန်ပြီး ခုထိ ကွဲနေတုန်းပဲ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 124
ko win says: သင့်ခ်ယူရှဲရှဲကျေးဇူးတင်ခ……အမှန်တကယ်ပင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားသွားပါသည်။
မြောင်းတကာ အူးဗိုက် ဘီအီးခိုက်ခင်ဗျား…..ဘီအီးနောက် အီးနှင့်အာ နှစ်လုံးဖြည့်၍ကို တိုက်လိုက်ချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: အန်တီကိုဝင်းခင်ည
ခုလိုပြောပေးတာနဲ့ တင် ၀သွားပါပကောဗျာ..
ဂယ်သောက်မှ ထွက်ပြေးဖို့စဉ်းစားနဲ့ ..ဟဲဟဲ..ဗျဲ..
ko win says: တိုက်မှာ..တိုက်မှာ..ဂယ်ကိုတိုက်အုံးမှာ။ အာဝါးပေးရင် အ၀ကိုတိုက်ပလိုက်မှာ။
မှတ်ချက်။ ။ ဘီဘီကိုကြောဒါနော်။
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: ကြိုက်မှကြိုက်..ကြိုက်မှကြိုက်..
Was this answer helpful?LikeDislike 7305
etone says: ဗိုက်ကလေးရေ… အခုလို အကျိုးပြုပို့စ်လေးတွေရေးပေးတာ အရမ်းကောင်းပါတယ် …. ။
အသစ်ဝင်သူတွေအတွက် တဖက်တလမ်းက အထောက်ကူပေးနိုင်တဲ့ ပို့စ်မျိုးပဲ …. ။ :)ရ
များများရေး များများရေသာက်နိုင်ပါစေနော် …. ။
(ရေသောက်တာကိုပြောတာနော် .. ဟဲဟဲ )
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: အန်တီအီးတုံးခင်ည
အန်တီမပေးခင်ကတဲက အဲဒီဆုက ပြည့်ခဲ့ရပါပကောဗျာ..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တင့်ခရုပါ အန်တီခင်ည
အရီး Khin Latt says: ကျုပ်တို့လဲ ပညာရပါတယ်အေ။
ဒီလို ခွဲခြားခွဲခြား မလုပ်နဲ့။
လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် တိုင်းမင်းကြီး ကို တိုင်လိုက်မယ်။ ;-)
အဟိ – နောက်တာနော် – တော်ကြာ အကြောက်လွန်ပြီး ခေါင်းမဖော်နိုင်ဘဲ ဖြစ်သွားမယ်။ :D
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: အဟမ်း..
နောက်နှစ်ကျပ်လောက် ထပ်လ ပေးပါဦးလား ခင်ည :D
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3137
surmi says: စောစောကပြောပါလား
ခုတော. ……ပိုက်ပိုက်တွေ တော်တော် ကုန်သွားမှသိလေခြင်း ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးကျေး …. နောက်တွေ.ရင် ဘီဘီ အ၀တိုက်မယ်
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: အူးလေး ရာဇာသံဂျောင်းခင်ည..
အိမ်ပြန်မပို့ ပေးဘူးဆိုတော့ အိမ်ထဲမှာပဲ ကစ်ကြတာပေ့ါဗျာ..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1618
Moe Z says: အခုလို အထင်ပေါင်းများစွာနဲ့ မတိမကျညွှန်းဆိုပြောပြပေးတာ
ကျေးဇူးပါဗျ .. နောက်လည်း ဆက်ရွှီးနိုင်ပါစေဗျ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6346
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: ဟုတ်ကဲ့
ကိုမိုးဂုတ်ရဲ့ ခုလို ချီးမွန်းမြှောက်ပင့်ကိုင်ပေါက်ပစ်ချပေးတဲ့အတွက် တင့်ခရုပါနော..
မြောင်းဒဂါ မစ်ချဒါ ဗိုက်ခ်
kyeemite says: မိစိန်ပေါက်..နင့်ဂိုဒီလိုခေါ်ရမှ အာတွေ့ဒယ်..
ငါ ဇေ လောက်တော့တိုက်နိုင်ပါတယ်အေ..
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: မာမီမိုက်ခ်
တိပါဘူး..များက စက်ကက်ထရီ ခေးမလေးနဲ့ခိုးပြေးသွားပြီထင်နေဒါ.. တော်တေးတာပေ့ါ..
ဘယာကြော်ခမ်မနီ ခေးမလေးလက်ထဲ မရောက်ခဲ့တာ.. hehe
မနက်ကျရင် အနံ့ ဆိုးထွက်လို့ 
အလင်းဆက် says: ကျေးဇူးပါ…………………………
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9261
ကြောင်ကြီး says: ကွန်နက်ရှင်ကြောင့်ဗာ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14
johnphyo paing says: ကျေးဇူးစကြာဝဠာလောက်တင်ပါတယ်
တားတားတို့ လိုအခုမှဝင်တဲ့ သူတွေအတွက်
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: ဟုတ်ဖ..ဟုတ်ဖ :D
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1143
mayjuly says: အဟမ်းဟမ်းးး ဂယ်ပဲဂယ်ပဲ ..
ဂယ်ကို မတိတာတော့ အဲဒါဒွေကို …
ထုမပဲ တိတော့ဒဂယ် ….
အကြီးကြီး ရှဲရှဲ … :D
MaMa says: -အူးဗိုက်ရေ
ဖားဖောက် (ဖားသက်ပြင်းမဟုတ်ပါ) က အတက်မမြန်လို့
ခရုမ်းကိုသုံးတော့လည်း တချို့ မြန်မာဖောင့်တွေကျတော့ မပေါ်ဘူးဖြစ်နေလို့။
ဥပမာ (မှန်အောင်ရေးထားတယ်နော်)- မြန်မာစာ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်း ဖွင့်ဖတ်၍မရပါ။
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: များဆီမှာ ရပါတယ်ဗျား….
ခရုမ်း ညာဘက် အစွန်ဆုံးမှာ ဂွပုံလေးကို နှိပ်လိုက်ရင်
ဒါမှမဟုတ် ဒီဟာတွေကို chrome://chrome/settings/ လိပ်စာအကွက်ထဲ ထည့်ပြီး အန်းတား ခေါက်လိုက်ရင်
အဲမှာ အောက်ဆုံးမှာ Show advanced settings… ဆိုတာလေးကို ထပ်နှိပ်
ပြီးရင် Web Cotent ဘေးမှာ customize fonts… ဆိုပြီးရှိတယ်..
အဲဒါကို ထပ်နှိပ်ရင် ဇော်ဂျီဝမ်းပြောင်းဖို့အကွက်ကျလာလိမ့်မယ်..
ဇော်ဂျီဝမ်းတွေ လိုက်ရွေးပေးပြီး အိုကေလုပ်လိုက်ပါနော.
အပေါ်တစ်ဆင့်က ဒေါ်ရှူရှူးမလဲ ကျေးဇူးပါဗျား..
MaMa says: အဲဒီလောက်သေသေချာချာ ပြောပြတာတောင် မနည်း လိုက်ရှာရတယ်။
ကျေးဇူးအကြီးကြီးတင်လို့ လက်မတစ်ချောင်း ပေးလိုက်တယ်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 923
mamanoyar says: ဗိုက်ဗိုက်ရေ ကျေးဇူးနော်
Comments By Postကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကိုနေ့ ချင်းပြန်စရိတ်ငြိမ်းနဲ့ သွားကြမယ် - kai - etoneဖုန်းတွေ၊နာရီတွေပေါ်မှာ တွေ့ရတတ်တဲ့(11:11)ရဲ့အဓိပ္ပါယ် - kai - Thint Aye Yeikကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ၈ ဦး - kai - ko sixသူမတူတဲ့ မိန်းမသားများအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် - kai - သျှားသက်မာန်"ေ ကာက်ရိုးမီး" - kai - ကိုပေါက်(မန္တလေး)ကျွန်တော်နဲ့ Dead Body (0:1) - kai - ko sixရေတွေကနိမ့်ရာကနေ မြင့်ရာကိုစီးဆင်းနေတဲ့နေရာ - သျှားသက်မာန် - သျှားသက်မာန်ခရီးသွားတဲ့အခါ ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေကို လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ ထုတ်ပိုးနိုင်ဖို့ သိထားရမယ့် အချက် (၁၅) ချက် - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikဇလုံတောင်ဘုရား မရောက်ဖူးသေး သူများနှင့် ဘုရားသမိုင်း - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikအရောင်ရင့်မှတ်တမ်း - ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၇ - kai - kaiMarijuana - ဆေးခြောက် - kai - ဇီဇီစာပေတိုက်ပွဲခေါ်သံ(၃)- အနုပညာလွတ်လပ်ခွင့် - Thint Aye Yeik - ko six''ဤ''ကို ခပ်လွယ်လွယ်--ကျွဲချင်သူတွေ များလွန်းတော့လည်း... - Thint Aye Yeik - ဇီဇီဖွင့်မရတဲ့ ဦးနှောက် - ko six - ko sixချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား - ဇီဇီ - ၀င့်ပြုံးမြင့်ဘီယာသောက်တဲ့ ပုဇွန် - ဇီဇီ - ဇီဇီThe Sense of Traveling - ဇီဇီ - လုံမလေးမွန်မွန်စာပေတိုက်ပွဲခေါ်သံ(၂)-NEO-CLASSICISM တွေ ထွက်ခဲ့ဟေ့ - Thint Aye Yeik - ၀င့်ပြုံးမြင့်ကဗျာလေး မူးနေပြီ - ၀င့်ပြုံးမြင့် - ၀င့်ပြုံးမြင့်ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေမယ့် ၂၁ရာစု၏တိုးတက်လာသော အသုံးဝင်နည်းပညာများ - သျှားသက်မာန် - Thint Aye YeikPromotion လေးတွေလာပါပြီ............................... - Thint Aye Yeikလေကြောင်းခရီးသွားသည့်အခါ တစ်ကိုယ်ရေးသုံး Liquid-Gel-Spray ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လိုသယ်ဆောင်သွားမလဲ ? ? ? - Thint Aye Yeikအေးခဲနေသောအနောက်နိုင်ငံကနိုင်ငံများ........... - Thint Aye Yeikပြည်ပခရီးသွားများ၏မျက်စိကျ လည်ပတ်ဖွယ်ဖြစ်လာသည့် မြန်မာ - Thint Aye Yeikအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံလေး...လာအိုသို့ - Thint Aye Yeikချိုသာခွန်းဆက်, နှုတ်ဆက်ကြလျှင် - manawphyulay - aye.kkယာဉ်အို စက်ဟောင်း ထိန်းမောင်းနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် - kai - manawphyulay​မွေး​နေ့ဆိုတာ - manawphyulay - Thint Aye Yeikအဝင်ကော - ko six - Thint Aye Yeikကဗျာဆန်ဆန်လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့...ကဗျာဝကမ်းခြေ (or) အပျိုစင်ကမ်းခြေ - သျှားသက်မာန် - Thint Aye YeikCategory	Arts & Humanities